Indlela yokugqoka ingubo nge-cardigan futhi ungabonakali njengogogo wakho - Imfashini 2022
Indlela yokugqoka ingubo nge-cardigan futhi ungabonakali njengogogo wakho
I-cardigan isesimweni, njengesitayela se-grunge, lapho ihambisana khona ngokuphelele. Kodwa kwabaningi, inhlanganisela yengubo enejazi ibonakala i-rustic. Kodwa uma ukhetha yonke into ngendlela efanele, uthola ukubukeka kwesitayela.
Ingubo ende enezimbali noma noma yikuphi ukuphrinta okukhumbuza ama-hippies we-1970, i-cardigan ende nezicathulo ezivaliwe ziyinhlanganisela ephelele kulabo abafuna ukuguqulwa okubushelelezi kusukela ehlobo kuya ekwindla. Kodwa kungcono ukushintsha amabhuzu ngamabhuzu e-ankle esitayela se-cowboy.
Ukukhetha i-cardigan efanele kuyisimo esiyinhloko sokubukeka okuphumelelayo. Ijazi elilukiweyo eliyi-voluminous chunky knit libukeka linesitayela ngokwalo, futhi nakakhulu ngengubo ethuthuka emoyeni namateku amakhulu.
Ngosizo lwe-cardigan ebabazekayo, ungakha hhayi kuphela ukubukeka kwesitayela se-boho, kodwa futhi nezinketho zakudala, njengesibonelo, kulesi sithombe. Udinga nje ukuthatha yonke into ngombala owodwa futhi ugcwalise ngezimbadada ezinomusa ngezithende.
Njengoba ngo-2019 yonke into iyimfashini yamabhande, ngisho namabhantshi namajakhethi aphansi, kuyisono ukungasebenzisi lesi sici ngekhati elithokomele. Lolu khetho lufanelekile kunoma yikuphi ukugqoka, kuhlanganise ne-knitted one-knitted kubambo.
Ngaphezu kwama-cardigans anemfashini futhi amancanyana alingana kahle emfanekisweni, njengemodeli uBella Hadid. Yena, elandela isibonelo sama-supermodels kusukela ngawo-1990, ugqoka i-blouse enjalo ku-ensemble efanayo ngengubo eqondile eqondile kanye neminyuzi.
Ikhanda elibuhlungu: indlela yokukhulula ukuhlaselwa nokuvimbela ukuthuthukiswa kwe-migraines
I-Migraine yisifo esingelapheki esibonakala ngokuhlaselwa yikhanda. Kungani i-migraine ivela, yini engayibangela nakho konke mayelana nokwelashwa kwe-migraine - funda kubhulogi ye-neurologist
Ngewashi: indlela yokunakekela isikhumba sakho ngezikhathi ezahlukene zosuku
Sitshela ngokuningiliziwe ukuthi yisiphi isikhathi sosuku sokusebenzisa izimonyo ezithile zokunakekelwa kwesikhumba, nini ukufeza izinqubo ezithile zezimonyo, ukuze zibe usizo esikhumbeni